Wararka - Maxay yihiin faa'iidooyinka ay carruurtu raacaan baaskiillada?
Baabuurka Toy koronto
Waa maxay faa'iidooyinka ay carruurtu raacaan baaskiillada?
Marka hore, booska fuulista saxda ah ayaa la samayn karaa
2) Kor u qaadida isku-xidhka iyo isu-dheellitirka Iyada oo baaskiil lagu wado meelo kala duwan, dheellitirka iyo isuduwidda dhinacyada bidix iyo midig ee maskaxda ayaa la xoojin karaa.
Marka labaad, raacitaanka baaskiiladu waxay u fiican tahay koritaanka carruurta
Jimicsigu waa dabeecadda ilmaha, raacitaanka baaskiilkuna wuxuu kor u qaadi karaa korriinka buuxa ee dhaqdhaqaaqa carruurta, awoodda dheelitirka, marka hore ee baaskiilka, sax
Inta badan ee ilmuhu u koraan ciyaaraha fudud.
Saddex, fuulitaanka baaskiilku waxay kobcin kartaa geesinimada carruurta
Marka laga reebo 'xirfadaha' fudud, baaskiil wadidku wuxuu caawiyaa carruurta inay yeeshaan geesinimo iyo kalsooni, iyo sidoo kale awoodda ay ku wada xiriiraan oo ay wada shaqeeyaan.
Afar, fuulista baaskiilku waxay leedahay saameyn fayow
Baaskiilku wuxuu wanaajin karaa shaqada wadnaha sambabada, jimicsiga xoogga muruqa ee addimada hoose wuxuuna kor u qaadaa dulqaadka jidhka oo dhan.Saamaynta jimicsiga adkaysiga ee xubnaha gudaha waxay la mid tahay dabaasha iyo orodka.
Shan, raacitaanka baaskiilku waxay wanaajin kartaa ka jawaab celinta ilmaha
Natiijooyinka cilmi baarista daawaynta casriga ah ee isboortiga ayaa muujinaya in baaskiilka ay u badan yihiin dhinacyo kala duwan, iyo badelashada labada lugood waxay kobcin karaan shaqada maskaxda bidix iyo midig isku mar.
Baaskiilku wuxuu u roon yahay niyadda farxadda leh
Inta badan ee aad dibadda ku qaadato inaad baaskiilkaaga ku qaadato, maskaxdaadu waxay noqon doontaa mid furfuran oo ilmahaagu wuxuu dareemi doonaa nasasho iyo firfircooni.
7. Baaskiilku waa hab wax ku ool ah ee wada xidhiidhka waalidka iyo ilmaha
U soo kaxaynta ubadkaaga si aad u kaxayso baaskiilku waxay xoojin kartaa xidhiidhka ka dhexeeya waalidka iyo carruurta. Dooro jardiinada waddooyinka ama jidka hareeraheeda oo la raac ilmahaaga jawi deggan, taas oo ka dhigi doonta ilmahaagu inuu aad kuugu kalsoonaado oo uu noqdo saaxiib wanaagsan oo midba midka kale .
Waqtiga boostada: Agoosto-20-2021
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd. oo ku yaala Shijiazhuang, Gobolka Hebei, waa shirkad ganacsi oo soo dejinta iyo dhoofinta xirfad leh, waxaan leenahay sanado badan oo khibrad ganacsi baaskiil ah.
Baaskiilada Baaskiilka Baaskiilada, Baaskiil/Baaskiilad 12 Inj ah, Baaskiilada dheelitirka, Hablaha Baaskiilka Baaskiilka, Dumar Buur Baaskiil, 20 Inj Baaskiil/Baaskiilad,
Zhuye Gaoxin International 001-1308, No.9 Changjiang Avenue, Degmada Gaoxin, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha.